"Maanta Sweden HIV layskuma gudbiyo" - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Olalaha wargelinta ee hey'adda caafimaadka dadka ee la xirira horumar laga gaaray cudurka Hiv 30kii sanno ee ugu denbeysay.
"Maanta Sweden HIV layskuma gudbiyo"
"Khatarta isku gudbin Hiv aad bay u yartahay"
La daabacay tisdag 1 december 2015 kl 12.59
Qofka uu ku dhacay cudurka HIV balse sida ay tahay u qaata dawooyinka lagu joojiyo waxaa aad u yar amaba eber ah khatar ah in uu cudurkan qof kale u sii gudbiyo, sidas waxaa yeri Luise Mannheymer oo horumood u ah mashruuc weligelin oo hey’adda Folkmyndigheten bilowdey.
- Haddii qof bukaanka ah uu helo daryeel sax ah markas khatarta ah in uu qof kale cudurka u gudbiyo aad iyo aad ayey u yar tahay maanta, dad badana middas ma oga, waana middan dooneyno in an wax ka baddelno, ayey tiri Luise Mannheymer oo hey’adda caafimaadka dadka folkhälsomyndigheten uga masuul ah mashruuca hividag oo ah mashruuc lagu wargelinayo dadweyna horumarka weyn 30 sano ee ugu denbeeyey laga gaaray cudurka HIV kaas oo maanta Sweden ka aheyn middii sidii hore dilaa u ah, ayna aad u hooseyso khartiisa isku gudbin haddii ruuxa bukaanka ah sidii loogu talogalay u qaato dawooyinka lagu joojiyo cudurka hiv.
Olalahan wargelin ee hey’adda Folkhälsomyndigheten ayaa ah olale heer qaran ah, iyadoo welin gelinta iyo macluumaadkan cudurkan la xiriira lagu soo dhajiyo banaanada iyo meelaha gaadiidka dadweynaha laga raaco. Macluumadka olalahan oo ku qoran afaf badan sida soomaaliga ayaa ciiwaan looga sameeyey barta internetka. Olalaha waxuu ku wajahan shacab weynaha Sweden oo dhan, iyadoo hadefka yahay sidii loo cusbooneyn lahaa aqoonta ay dadka ka heysaan cudurka HIV. Waayo bukaanka maanta cudurkan sida tayadiisa nolaleed waa mid wanaagsan laakiin weli dhib weyn waxuu ka taagan yahay takoorka iyo bahdilka ay la kulmaan dadka la nool HIV, ayey tiri Luis Mannheymer:
- Dadkan nolal wanaagsan ayey heystaan, laakiin weli wey ku adag tahay in ay dadka kale u sheegan in ay qabaan oo la noolyhaiin hiv sida cudurada kale. Waxaana lagu hayaa takoor baaxadweyn. Sababtas ayaa olalahaan wargelin u hirgelinay si aan dadka u gaarsiino aqoon cusub si uu takoorka u yaraado ayey tiri.
Qisooyinka dad la nool hiv
Barta internetka ee olalahan ayaa waxaa la soo dhigay wareyso lala yeeshay dad qaba oo la nool cudurka hiv kuwaas oo ka sheekeynaya xaaladooda nolaleed iyo sida ay nolashooda isku badashay kaddib markii horumar laga gaaray hiv oo la helay dawooyin hagaagsan oo lagu joojiyo cudurkan si uusan isku baddelin Aids.
Ophelia Hanyaama ayaa ka mid ah dadyowga maanta Sweden la nool cudurka hiv ee qisadooda nolaleed lagu soo bandhigay olalaha hey’adda Folkhälsömyndigheten. Ophelia Hanyaama maanta 50 sanno jir. Iyadoo 17 sanno jir ah oo ku nool waddankeedii hooyo ee Zambia ayaa uu cudurka hiv haleelay. Waa muddo hadda laga joogo 33 sanno ka hor. Markii ay ogaatay in cudurkan ku dhacay waxay isku diyaarisay geeri. Waxaan soo gatay canbuur qurxoon iyo kabo laygu xabool, waxaana doortay muusikadii laga shidi lahaa xabaasheyda ayey tiri.
- Waxan go’ansaday mar haddaan dhibanayo waxaan u dhibanayaa si qurxoon. Nafta inta ay iga baxayso waxaan dhageysanayaa musik, aaskeygana waxaan u soo gatay canbuur qurxoon iyo kabo laygu aaso. Laakiin kaddib markii wiilkeyga oo hadda 20 sanno jir ah dhashay oo ka caafimaad qabay hiv ayaa go’aansaday in aan nolashiisa ka qayb qaato, ayey tiri.
Canbuurkii ay 33 sanno ka hor u soo gadatay geerideeda weli waxuu suranyahay maqsiinka dharka. Maantan Ophelia Hanyaama waxay ku noolshahay nolal wanaagsan, 2 ilmood oo ka caafimaadka qabta hiv ayaa u joogta. Halkii ay awel welwel ka qabtay geeri waxay maanta ka welwelsan tahay duqooshinnimo iyo cimri dheeri. Balse midda keliya ee dhibaatada ku heysa ayaa ah aragtida qaldan ee bulshada ka heysato dadyowga la nool cudurka Hiv.
”Weli dadka xaasiyad ayey ka qabaan cudurkan, aqoontooda la xiriirta sida layskugu daarto waa mid hooseysa. Waxay weli dad badan qabaan aragti ah cudurkan weli in uu yahay sidii sagaashamaadkii. kamana warhayaan dawooyinka wax ku ool ah ee maanta lagu joojiyo cudurkan”, ayey tiri Ophelia Hanyaama.
Musesultan: bukaan u maleeya berri in ay dhimanayaan baan nooyimaada